आँखाको हेरचाह कसरी गर्ने ? – Daunne News
आँखा तुलनात्मक रूपमा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवदेनशील अंगमा पर्छ । त्यसैले आँखाको उचित हेरचाहको पनि उत्तिकै जरुरी छ ।आँखाको बनावटको आधारमा प्लस र माइनस पावर आवश्यक हुन्छ । यो कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन । कतिपय व्यक्ति थाहा पाएर पनि हेलचेक्र्याइँ गरी बसेका हुन्छन् । यसकै कारण आँखाको दृष्टि कम हुँदै गएर ज्योति गुम्ने खतरासमेत हुन्छ । त्यसकारण समयसमयमा आँखा जाँच गराएर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार चस्मा लगाउनु पर्छ ।
प्रदूषणका कारण हुने एलर्जी र चिलाउने समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या उल्लेख्य छ । त्यसबाट बच्न सनग्लास लगाउने बानी राम्रो हुन्छ । बजारमा पाइने सबै चस्मा लगाउन योग्य भने हुँदैनन् । मोबाइल धेरै समयसम्म चलाउने, कम्प्युटरमा लगातार काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत आँखाको समस्या हुन्छ । यसले आँखा सुक्खा बनाउँछ । कम्प्युटरबाट आउने नदेखिने विकिरणबाट बच्न समेत डाक्टरको सल्लाहअनुसार चस्मा लगाउनु पर्छ ।
आँखालाई भिजाइराख्न र सुक्खा हुन नदिन समेत चिकित्सकको सल्लाहअनुसारको औषधि आवश्यक हुन्छ । सवारी चालकले समेत चस्मा लगाउन जरुरी छ । बढ्दो जङ्कफुडको प्रयोगले समेत आँखामा समस्या आउँछ । हरियो सागपात, पहेँला फलफूल र भिटामिन ए पाइने खाना पर्याप्त मात्रामा खानु आवश्यक हुन्छ ।
आँखाको दृष्टि बच्चा बेलादखि नै ख्याल गर्नुपर्छ । यसका लागि अभिभावक चनाखो र सचेत हुनुपर्छ । बच्चाको आँखाभित्रको सेल्सले काम नगरेको कारणले एउटा मात्र आँखा देखिरहेको हुन सक्छ । यस्तो कुरा न अभिभावकलाई थाहा हुन्छ, न त बच्चाले नै भन्न सक्छ । सुरुमै दृष्टि परीक्षण भयो भने थेरापीको माध्यमबाट आँखालाई देख्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । यसबाट पनि युवावस्थामा हुने आँखाको समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
आँखामा विभिन्न खाले रोगले समेत आक्रमण गरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ सिजनल रोगले आक्रमण गर्दा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन । यसका लागि सरसफाइमा ध्यान दिन जरुरी छ । विद्यार्थीका लागि २५ सेन्टिमिटरभन्दा टाढा राखेर पढ्ने बानी राम्रो हुन्छ ।
आँखामा चोटपटक लागिहाल्यो भने हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मेडिकल गएर आफूखुसी औषधि राख्ने बानीले आँखाको ज्योति सदाका लागि गुमेका घटना धेरै छन् । त्यसकारण संवेदनशील अंग आँखाको हेरचाहका लागि विशेष ख्याल गर्ने र विशेषज्ञको सल्लाह आवश्यक हुन्छ ।
(नेपाल आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरका नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. कमल खड्कासँग समीरबाबु कट्टेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नवलपरासी जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट लगाईदै
आज ३५५३ कोरोना संक्रमित थपिए, काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै दुई हजारमा संक्रमण पुष्टि